Ha u isticmaalin dharka “biyaha celiya” sida koodh roob.
Farqiga u dhexeeya marada biyuhu xiraan iyo dharka biyaha celiya Guud ahaan, dharka biyaha celiya waxaa laga sameeyaa dharka biyaha celiya. Biyo ayaa dhibco ka sameysma dusha dharka (Sida caleen Lotus oo kale). Laakiin, laakiin dhab ahaantii ma aha mid biyo-diid ah, laakiin waxay yareyneysaa nuugista biyaha ...
Midabkee ayaad doorbideysaa koodhka roobka ee maalmaha Roobabka? Ma taqaanniin midabka ugu ammaansan ee loo yaqaan 'raincoat'?
Midabkee ayaa ugu caansan dharka roobka? Maalmaha roobka, aragtida oo liidata awgeed, waxaa fiican inaad xirto koodh roob leh oo leh midabyo dhalaalaya si loo xusuusiyo dadka lugeynaya iyo kuwa baabuurta soo maraya inay fiiro gaar ah kuu yeeshaan. Sida casaan dhalaalaya, jaalle dhalaalaya, oranji, cagaar iwm.
Qalab noocee ah ayaa u roon jaakadaha roobka iyo sida loo doorto dharka roobka?
Sida aan wada ogsoonahay, cimiladu waa isbedbedeli kartaa xilli roobaadka. Waa dhibaato in la baxo maalinta roobka. Xitaa haddii ay jirto dallad, surwaallada iyo kabaha way qoyaan doonaan, gaar ahaan marka roobka iyo dabeyluhu xoog yeeshaan, dalladdu kuma filna inay na difaacdo. Marka waa muhiim in la doorto tayo sare ...
Haweenka Koodhka Roobka, Pu Raincoat, Carruurta Pu Raincoat, Peva Raincoat, PCV Poncho, PCC Raincoat,